Wararka Maanta: Khamiis, Feb 12, 2009-JEN. MAXAMED NUUR GALAAL: “Waxaan leeyahay Madaxweynaha cusub soo xulo Dad Mas’uuliyiin ah oo aan ahayn hebel iyo hebelyo badan oo burburiyay dowlado horay loogu soo dhisay Soomaaliya”
Jen. Maxamed Nuur Galaal
Jen. Galaal oo isagoo ku sugan Magaalada Nairobi ee dalka Kenya u waramayay Idaacadda Horn Afrik ee Magaalada Muqdisho ayaa wuxuu sheegay in uu ku faraxsan yahay, soona dhaweynayo Dowladda cusub ee Soomaaliya, wuxuuna carrabka ku dhuftay in uu rajo ka qabo in dowladdan oo ay ku wada jiraan dowladdii hore ee TFG-da iyo Mucaaradkii ka soo horjeeday ay wax badan qaban doonto.
“Marka laga yimaado in aan soo dhaweynayo, waxaan rabaa in aan talooyin ujeediyo madaxweynaha Dowladda cusub ee Soomaaliya Shiikh Shariif Shiikh Axmed, waxayna tahay talada aan siinayo in uu ka feejignaado waxybihii lugta jiiday ee burburiyay dowladihii soo maray Soomaaliya”ayuu yiri Jen. Galaal oo sheegay in madaxweynaha cusub uu yahay Nin ay inta badan dadka Soomaaliyeed ku barteen Maxkamadihii Islaamka ee lixda bilood ka talinayay deegaano dhowr ah oo ka tirsan Koofurta iyo Bartamaha Soomaaliya.
“Waxaan leeyahay Madaxweynaha cusub soo xulo Dad Mas’uuliyiin ah oo aan ahayn hebel iyo hebelyo badan oo burburiyay dowlado horay loogu soo dhisay Soomaaliya”ayuu yiri Jen. Galaal oo intaas ku daray in uu kula talinayo Dowladda cusub in ay sameysato Ciidamo Qaran oo ammaanka la suga, “Waayo Ciidamada iyagaa dowladnimada yaqaana, iyagaa ammaanka sida loo xasilinayo yaqaan” ayuuna hadalkiisa ku sii daray.
Mar wax laga weydiiyay Jen. Galaal in uu xil ka doonayo Dowladda cusub waxaa uu sheegay in uusan ahayn qof xil u ordayo hayeeshee waxaa uu sheegay in uu diyaar la yahay wixii talo ah ee looga baahdo, “Aniga xil-doon maahi, Dowlad badan oo Dalkan soo marayna xil kama qaban”ayuuna yiri Jen. Maxamed Nuur Galaal.